एनआरएनभित्र मध्यरातमा भनाभन, उपाध्यक्षलाई मानहानी मुद्दा हाल्ने मुख्य संरक्षकको चेतावनी ! « MNTVONLINE.COM
एनआरएनभित्र मध्यरातमा भनाभन, उपाध्यक्षलाई मानहानी मुद्दा हाल्ने मुख्य संरक्षकको चेतावनी !
गैरआवासीय नेपाली संघको ओसेनिया क्षेत्रीय बैठक शनिबार सकियो । ज्ञान सम्मेलन आज आईतबार चलिरहेको छ । बैठकको सुरुवातमा सौहाद्र्र देखिएको बैठक अन्त्यसम्म पुग्दा भने चर्काचर्की र आरोप प्रत्यारोपमा टुंगिनपुग्यो । यो स्थितिलाई रोक्न स्वयं अध्यक्ष कुमार पन्त अघि सर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको थियो ।
बाहिर स्वास्थ्य र महामारीमा देशको सम्बृद्धिका लागि भनिएपनि बैठकको भित्री कुरा भने हालै अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्मासहित अहिलेको टिमले ल्याएको शून्य सदस्यताशुल्क र एमआईसमा दर्ता प्रक्रिया स्मार्ट एनआरएनको अवधारणा नै विवादको बिउ हो भन्दा फरक पर्दैन ।
ओसेनिया क्षेत्रको बैठक भएका कारण यो कन्सेप्टमा सुरुमा एनआरएन अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेलले आपत्ति जनाए । उनले घुमाउरो पारामा स्वयंसेवकहरुको हेरविचार गर्न नसकेको आरोप आईसीसीलाई लगाउँदै आफुहरुलाई निर्णय लाद्ने प्रयास भएको जिकिर गरे । यो प्रसंग थियो उद्घाटन सत्रको । मन्त्रीसहित उपस्थित कार्यक्रममै कँडेलले डिजिटल मतदान स्वीकार गर्न नसकिने आशय देखाएका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुग्दा सदस्यता शुल्क मिनाहा गर्ने हो भने एनआरएन चलाउनै समस्या हुने तर्कहरु आउन थाले । यसै प्रसंगमा लाप्राक र एनआरएन भवनको विषय उठ्दा उपाध्यक्ष बद्री केसीले भवनको जग्गा खरिदको प्रसंग उठाए । त्यतिबेला महासचिव रहेका केसीले आफुलाई समेत जग्गाको विषयमा परेका मुद्दाका बारेमा गुमराहमा राखिएको र सिईओलाई सोद्धा अध्यक्षले यो जानकारी कसैलाई नगराउनु भनेको छ भन्ने जवाफ पाएको उनले बताए । यसले सिधा पूर्वअध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्य संरक्षक शेष घलेलाई तोड पर्नगयो । जग्गा खरिदको सिफारिश गर्ने कमिटीमा रहेका पाँच मध्ये एक सोनाम लामाले कागजपत्र सबै हेरेर तत्कालीन कानून बमोजिम नै खरिद गरेको भन्ने दावी त प्रस्तुत गरे । तर, यसपछि बोलेका पूर्वअध्यक्ष घलेले भने बद्री केसीले नियतपूर्वक नै आफुलाई आरोपित गरिरहेको र यो क्रम निकै लामो समयदेखि चलेको भन्दै आफ्नो आक्रोश पोखे । उनी यतिमा मात्र रोकिएनन् यदि यस्तै रवैया रहे डिफेमेसन (मानहानी) को मुद्दा हाल्ने चेतावनी पनि दिए । एकाएक माहोल गरमागरम बन्दा अष्ट्रेलियन समय अनुसार रातिको एक बजिसकेको थियो ।
तत्कालै अध्यक्ष कुमार पन्तले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयास गर्दै दुबै पक्षलाई बैठकको एजेन्डा बाहिर नजान आग्रह गर्नुपरेको थियो ।